Al-Shabaab oo lagala wareegay deegaanno ka tirsan Gobolka Hiiraan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Al-Shabaab oo lagala wareegay deegaanno ka tirsan Gobolka Hiiraan
Kooxda Macawuusleeyda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ka wada deegaannada Bari ee Gobolka Hiiraan ayaa maanta Al-Shabaab kala wareegtay deegaanno dhowr ah oo horay ay gacanta ugu haayeen argagxisada.
Deegaanada ay ciidankaasi Al-Shabaab kala wareegeen waxaa kamid ah Hees Oroton iyo Madhooy oo hoostaga Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan, muddoyinkan dambane Al-Shabaab ay maamulayaan, halkaasi oo ka mid ah meelaha ay dadka ku dhibaateyn jireen.
Warkan waxaa Warbaahinta u xaqiijiyay Cabdiqaadir Axmed Maxamuud oo loo yaqaano (Bilig Bilig), oo sheegay in uu yahay Taliyaha Ciidanka Macawuusleeyda ee dhanka bari ee Gobolka Hiiraan.
Taliyaha ayaa ugu baaqay ciidanka xoogga dalka iyo AMISOM in ay garab siiyaan dadka deegaanka ee iskood isku abaabulay oo gar waaqsaday in ay dhaq-dhaqaaqa Al-Shabaab dagaal la galaan.
Qaar kamid ah dadka deegaanka oo aan xiriir la samaynay ayaa waxaa ay sheegeen in Shabaabka ay isaga carareeb dhulkaasi,kadib markii dadka deegaanada waqooyi u diyaar garoobeen dagaal.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhawaan howlagllo kala duwan ka sameeyay deegaanno u dhaxeeya degmooyinka Bula Burte iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan.